अमेजन प्राइम छात्र छूट (२०२०) - प्राइम भिडियो, संगीत - मनोरञ्जन
कसरी अमेजन प्राइम विद्यार्थी छुट छ?
अमेजन प्राइम विद्यार्थी छूट प्रयोगकर्ताहरूलाई सस्तो मूल्यको लागि प्रीमियम सेवाहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। अमेजन इन्टरनेट को सब भन्दा ठूलो रिटेल स्टोर हो। उनीहरूले आफ्नो सेवाहरू मार्फत संसारलाई तूफानको साथ लगेका छन्।इकोसिस्टमसँग अपार क्षमता छ। अमेजनले सधैं उनीहरूका ग्राहकहरूलाई प्रस्ताव गर्ने विकल्पहरू विस्तार गर्दैछ। अनलाइन शपिंग गर्न मन पराउने मानिसका लागि प्राइम सदस्यता आवश्यक छ। अमेजन प्राइमको अनुभव भनेको तपाईंलाई अधिक सन्तुष्टि प्रदान गर्नु हो। बिद्यार्थीहरुलाई बिभिन्न उपयोगिताहरु, मनोरन्जन र पुस्तकहरुका लागि अमेजन चाहिन्छ।
विचारशील विद्यार्थी छुट कार्यक्रमले तपाईंलाई छ-महिना निःशुल्क परीक्षणको मजा लिन मद्दत गर्दछ। त्यहाँ अन्य अतिरिक्त सुविधाहरू पनि छन्। हामी यस लेखन-मा छुटको बारेमा हरेक विवरण कभर गर्नेछौं। थप जान्नको लागि पढ्नुहोस्।
कसरी नेटफ्लिक्स विद्यार्थी छुट छ?
अमेजन प्राइम स्टुडेन्ट छूट कसरी पाउने?
विद्यार्थी छुटमा साइन अप गर्ने प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सीधा हुन्छ। जो अहिले कलेजमा भर्ना गरिएको छ उसले यस छुटको आनन्द लिन सक्दछ। तपाईं लामो समयको लागि धेरै थोरै खर्च गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी छूट भारी खरीदको समग्र लागत कम गर्न मा तपाईंलाई मद्दत गर्दछ। घट्दै गइरहेको अर्थव्यवस्थामा हुनु यो उत्तम विकल्प हो। धेरै बिद्यार्थीहरु आफ्नो वित्तीय रखरखाव संग समस्याहरु को सामना गर्दै छन्। विद्यार्थी छूट परिस्थिति अलि राम्रो बनाउन मद्दत गर्दछ। प्राइम डिलहरूको लागि साइन अप गर्नका लागि तपाईले अनुसरण गर्नुपर्ने यी चरणहरू छन्।
प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको कम्प्युटर ब्राउजरहरूमा अमेजन वेबसाइट सुरू गर्नु पर्छ। तपाईं ल्यापटप, डेस्कटप, वा मोबाइल फोनबाट साइट भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ। सबै प्लेटफार्महरूमा यो आश्चर्यजनक कार्य गर्दछ।प्रयोगकर्ताहरूले वैकल्पिक रूपमा तलको लिंकमा क्लिक गर्न सक्दछन् - https://amzn.to/2YrHxlA । यो ले तपाईंलाई आधिकारिक प्राइम विद्यार्थी सदस्यता पृष्ठमा लग्नेछ।
गृह पृष्ठमा स्टार्ट ट्रायल बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईंले यसलाई साइटको शीर्ष दायाँ कुनामा फेला पार्नुहुनेछ। विद्यार्थीहरू सबै तिनीहरूका कलेज आवश्यकहरूमा नि: शुल्क दुई दिनको वितरण लिन सक्छन्। छ-महिना नि: शुल्क परीक्षण तपाईं एक साझेदारी सम्झौताको मद्दतको साथ ल्याउँछ।
एक पटक तपाईले ट्रायल सुरु गर्नुभयो, तपाईले अमेजन वेबसाइटमा साइन इन गर्नु पर्छ। ईमेल ठेगाना र पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईंको खातालाई प्लेटफर्ममा जोड्दछ।
प्रयोगकर्ताहरू जोसँग अमेजन खाता छैन उसले नयाँ सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। यो अमेजन प्राइम छात्र छूट को फाइदा लिन खाता दर्ता गर्न महत्वपूर्ण छ। तपाईंले सानो विवरणहरू जस्तै ईमेल, फोन नम्बर, नाम, र पासवर्ड सिर्जना गर्न आवश्यक छ। एकचोटि तपाईंले आफ्नो नयाँ खाता प्रमाणित गर्नुभयो, प्रक्रिया जारी राख्न सकिन्छ।
तपाईंले निश्चित गर्नु आवश्यक छ कि तपाईंसँग विश्वविद्यालय विवरणहरू उपलब्ध छन्। अमेजनले यो प्रमाणित गर्न आवश्यक छ कि तपाई कलेजमा पढ्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरूले केहि सानो व्यक्तिगत जानकारी स collect्कलन गर्नेछन्। स्वचालित प्रमाणिकरण प्रक्रिया सामान्यतया केहि मिनेट लिन्छ।
अनलाईन भुक्तानी गर्नु प्रयोगकर्ताका लागि महत्वपूर्ण छ जो छुटको लागि साइन अप गर्न चाहन्छन्। योजना छ महिना पछि सक्रिय हुनेछ, तर तपाईं भुक्तान विवरण अग्रिम प्रदान गर्न आवश्यक छ। भुक्तानी विवरण प्रविष्ट गर्नुहोस् ताकि तपाईं निःशुल्क परीक्षण सुरू गर्न सक्नुहुनेछ। यो लामो दौडमा विद्यार्थीहरूको लागि धेरै राम्रो काम गर्दछ।
Voila! यी चरणहरूको प्रयोग गरेर तपाईंले सफलतापूर्वक अमेजन प्राइम विद्यार्थी छूटको लागि साइन अप गर्नुभयो। अब तपाईं तिनीहरूको सेवाको साथ आउने सबै प्रीमियम लाभहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ। हामी प्रत्येक युवा विद्यार्थीलाई यो सम्झौताको प्रयास गर्न सिफारिस गर्दछौं। छ महिना नि: शुल्क अमेजन प्राइम सेवाहरूले तपाईंलाई धेरै पैसा बचत गर्न मद्दत गर्दछ।
अमेजन प्राइम छात्र छूट को बारे मा:
अमेजन एक अरबौं डलर कम्पनी हो कि विशाल उपयोगकर्ता आधार छ। विद्यार्थी र युवा वयस्कहरू आफ्नो अनलाइन ग्राहकहरूको एक महत्वपूर्ण अनुपात गठन। प्राइम विद्यार्थी छुट छ आफ्नो ग्राहकहरु लाई फिर्ता दिन एक तरीका हो। अब तपाईं तिनीहरूको प्रीमियम सेवाहरूको मजा लिन सक्नुहुनेछ यस सेवाका साथ। छ महिनाको परीक्षण समाप्त नभएसम्म तपाईंले एक पैसा पनि तिर्नु पर्दैन। यसलाई साकार पार्न उनीहरूले टेलिकम जायन्ट स्प्रिन्टसँग साझेदारी गरेका छन्। स्प्रिन्ट संयुक्त राज्य भर मा एक अग्रणी सेवा प्रदायक हो। कोरोनाभाइरस महामारीले सबैका लागि चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले विद्यार्थीले केही फाइदाहरू छुट पाउन छुट पाउनुभयो।
छुट को लागि को योग्य छ?
विद्यार्थी छूट हाल संयुक्त राज्यको क्षेत्र मा मात्र उपलब्ध छ। समान कार्यक्रमहरू संसारभरि चलिरहेका छन्। अमेजनले भारतमा युवा कार्यक्रम शुरू गरेको छ, जुन यसको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो बजार हो। जो कोही जो एक पंजीकृत अमेरिकी विश्वविद्यालय मा एक सक्रिय विद्यार्थी छ बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ। अमेजनले तपाईंको ईन्रोलमेन्ट रुजू गर्दछ र तपाईंलाई फाइदा तुरून्त दिन्छ। प्रयोगकर्ताहरूसँग डट EDU ईमेल खाता पनि हुनु आवश्यक छ। तपाईले साईन अप गर्नु भन्दा पहिले यो एक महत्त्वपूर्ण शर्त हो।
अमेजन प्राइम छात्र छूट को लाभ:
अमेजनले यस महामारीको स्थितिमा विद्यार्थीलाई महत्वपूर्ण फाइदाहरू प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अप्ठ्यारो अर्थतन्त्रले कुनै सहयोग गर्दैन, तर यो सम्झौताले चाँदीको अस्तर थप गर्दछ। यहाँ विद्यार्थी छुट प्रयोग गरेर केहि फाइदाहरु छन्।
अमेजन प्राइम सेवाहरू अब विद्यार्थीहरूलाई $ .4..4। को लागि उपलब्ध छन्। सामान्यतया, लागत कतै मासिक $ 15 प्रति महिना हो। मूल्य छुट मा कम उल्लेखनीय छ। विद्यार्थीहरूले पनि यस सदस्यतामा छ महिना निःशुल्क पाउनेछन्। यो प्रभावी रूपमा तपाईं एक अनलाइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सबै भन्दा राम्रो सम्झौता हो। समग्रमा तपाईले अनलाइन खरीदहरूमा धेरै टन पैसा बचाउनुहुनेछ।
छिटो र नि: शुल्क वितरण:
कसैले पनि शिपिंगका लागि अतिरिक्त शुल्क तिर्न मन पराउँदैन। अमेजन निश्चित गर्न कोशिस गर्दछ कि तपाईं थोरै बचत गर्न सक्नुहुनेछ। नि: शुल्क परीक्षणले तपाईंलाई डोलिभरी शुल्कहरू बचाउन मद्दत गर्दछ। अब तपाईं यो प्लेटफर्म मार्फत तपाईंको सबै चीजहरू डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाईले आवश्यक सेवाहरूको छिटो डेलिभरीको लागि सेवाहरूको प्रयास गर्नु पर्छ। तिनीहरू विद्यार्थी आपूर्ति को लागी अतिरिक्त ध्यान दिन परिचित छन्।
छुट मा प्राइम संगीत:
अमेजन प्राइम संगीत महान गीतहरूको एक विशाल पुस्तकालय हो। विद्यार्थी छूट प्रयोगकर्ताहरूले प्रत्येक महिना $ १ भन्दा कमको लागि सदस्यता प्राप्त गर्न सक्दछन्।यो क्याम्पसमा सबै बास टाउकोको लागि मीठो सम्झौता हो। तपाईको बन्डल योजनाको साथ अमेजन मार्फत उच्च-गुणवत्ताको संगीतको मजा लिनुहोस्।
विशेष विद्यार्थी सौदाहरू:
तपाइँले इलेक्ट्रोनिक्स, पाठ्यपुस्तकहरू, खाजा, कपडा, स्वास्थ्य सेवा, र सहायक उपकरणहरूमा नयाँ डिलहरूमा पहिलो सूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ।
विद्यार्थी जीवनशैली को लागी तपाईले बहु उत्पादनहरु मा लगानी गर्नु पर्छ। यी विद्यार्थी सौदाहरु मिक्स को एक महान थप हो।
विद्यार्थीहरू प्लेटफर्ममा प्रीमियम मनोरन्जनमा पनि पहुँच प्राप्त गर्दछन्।तपाईं यस सदस्यता संग प्राइम भिडियो र प्राइम पढ्ने सेवाहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ। प्राइम भिडियोसँग गुणात्मक सामग्रीको विशाल पुस्तकालय छ। प्लेटफर्ममा सबैभन्दा लोकप्रिय शो टम क्लेन्सीको, ज्याक र्यान हो। प्राइम रेविज्ञापनले तपाईंलाई बिलकुल सित्तैमा धेरै पुस्तकहरूमा पहुँच दिन्छ।
यी सबै उत्कृष्ट सुविधाहरू हुन् सबैसँग समावेशी डिलसँग। तपाईं प्रारम्भिक छ महिना अवधिमा यी सेवाहरूको निःशुल्क मजा लिन पाउनुहुनेछ।
अमेजन प्राइम विद्यार्थी छूट अनलाइन व्यवसाय द्वारा एक उत्कृष्ट पहल हो। यस गाईडमा हामी सदस्यताका बारे तपाईका सबै शंकाहरू मेटाउन आशा गर्दछौं। सस्तो मूल्यमा अनलाइन शपिंगको आनन्द लिनुहोस्।
नि: शुल्क नेटफ्लिक्स खाताहरू २०२०
MFASetup - माइक्रोसॉफ्ट मल्टी फैक्टर प्रमाणीकरण गाइड
विन्डोज १० मा कसरी आईट्यून्स डाउनलोड गर्ने?
कसरी Xbox एक मा Discord प्रयोग गर्ने?
भ्वाइसमोड प्रो समीक्षा - के यो प्रयोग गर्न सुरक्षित छ?
नेटफ्लिक्स बनाम डिस्ने प्लस - कुन स्ट्रिमिंग सेवा उत्तम छ?
कसरी काम गर्ने Netflix फिक्स गर्ने?
के युट्यूब डाउन छ? अहिले लाइभ स्थिति जाँच गर्नुहोस्
२०२० मा सर्वश्रेष्ठ VPN सेवाहरू - शीर्ष १० सबैभन्दा सुरक्षित
यूट्यूब टिभी बनाम हुलु लाइभ - कुन चाहिँ उत्तम सेवा हो?
रोक्वमा डिस्ने प्लस कसरी हेर्ने?
रोबलोक्समा क्याटलगबाट नि: शुल्क चीजहरू कसरी प्राप्त गर्ने
Android को लागी सबै भन्दा राम्रो नि: शुल्क स्क्यानिंग अनुप्रयोग
म कसरी अनुप्रयोगहरू बन्द गर्छु
नि: शुल्क अनलाइन फिल्म पूर्ण लम्बाई
१ मा १ अनब्लक गरिएका खेलहरू
अनुप्रयोग स्टोरको साथ आईओएस इमुलेटर
स्ट्रिमि tv टिभी नि: शुल्क अनलाइन देखाउँदछ